ကျွန်ုပ်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ် | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သော ၂ လကဂျိမ်းစ်ကော်နို၏စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာပြီးပြည့်စုံသောစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်လိုပါသလားဟုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါကအတွက် sucker မိပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ် ဒါနဲ့ငါချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ငါထင်မြင်ချက်ကိုငါမြင်သကဲ့သို့သင်တို့လည်းငါအလွယ်တကူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရ Content Rich ၏သုံးသပ်ချက်ကို.
၎င်းသည်အောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်းသူသိခဲ့ပေမည်! စာအုပ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိသွားပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်တောင်းလိုက်ပြီးသူတို့ကိုအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂါတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ ယခုအချိန်အထိတုန့်ပြန်မှုသည်လုံးဝတညီတညွတ်တည်းဖြစ်နေသည် - ဤသူကားငါဖြစ်သည် တစ်နှစ်တာ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်!
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဂျိမ်းစ်အချိန်အနည်းငယ်ယူပြီးသူနှင့်ဖုန်းပြောခွင့်ရခဲ့သည်။ သူကနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးသူ့အချိန်နှင့်အတူသနားတော်မူခဲ့သည်။ ဒီစာအုပ်ကိုသူတုန့်ပြန်လိုက်တာကိုသူအံ့သြသွားမှာသေချာတယ် ဂျိမ်းစ်အုပ်စု၏ Playbook ။ ဂျိမ်းစ်အုပ်စုသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြီးထွားစေရန်ကူညီရန်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ကတစ် ဦး နှင့်အတူရှိသည်ကြီးထွား 95% အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာ နှင့်ဤစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကာလအတွင်းခံစားနေရပြီးတစ်ခုတည်း client ကို။
ဤစာအုပ်သည်သီအိုရီမဟုတ်ပါ၊ အတွေးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး မှရေးသားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ဂျိမ်းစ်အုပ်စုသည် ၆ နှစ်ကြာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ၆ နှစ်တာတွင်ဤနည်းလမ်းများကိုလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ဂျိမ်းစ်ကထိုစာအုပ်သည်သူတို့ဖောက်သည်များနှင့်နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ပုံကြောင့်၎င်းသည်ရေးရန်လွယ်ကူသည်။
ဒါက CMO မဟုတ်ဘဲစီအီးအိုအတွက်ရေးတာပဲ။ တကယ်တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦး တည်တယ်။
ထိုစာအုပ်သည်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မှစီအီးအိုတစ် ဦး အဖြစ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အဖြစ်ရေးသားခဲ့သည်။ စီအီးအိုသည်ဂျိမ်းစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သောရာပေါင်းများစွာသောစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၏စုစည်းမှုဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်သည်ဖတ်ရလွယ်ကူပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္ across အားလုံးတွင် - အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအထိဖြစ်သည် SEO ဆိုသည်မှာ နှင့်ဝဘ်ဒီဇိုင်း။
အဆိုပါစာအုပ်စာအုပ်အသေးစိတ်အပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ - ငါ့နှလုံးအနီးကပ်နှင့်ချစ်လှစွာသောတစ်ခုခု!
James Connor သည်စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားထက်သန်သူဖြစ်ပြီးအလယ်အလတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောဆိုသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စာအုပ်၏အခမဲ့မိတ္တူတစ်စောင်ကိုရယူလိုပါက၊ သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ် (လိုအပ်သည်) နှင့်သင်ဘာကြောင့်ကူးယူလိုသနည်းအကြောင်းအသေးစိတ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်ပုံစံမှတဆင့်မိတ္တူတစ်ခုတောင်းခံပါ။ သင်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်အကြောင်းသင်ဘလော့ဂ်လုပ်မည်ဟုကတိပေးသလောက်သင့်အားမိတ္တူတစ်စောင်ပို့မည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာကျန်တော့သည် - ထို့ကြောင့်မြန်မြန်လုပ်ရန်သေချာပါစေ။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ရေးပြီးလိပ်စာတစ်ခုတောင်းခံပါမည်။
လက်လွတ်မနေပါနှင့်၊ ပထမအခန်းကြီး ၄ ကို Perfection of Marketing ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ စာအုပ်ကို ၃ စုံဖြင့် ၁ ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
10:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 09
ဤအရာသည်စာအုပ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ရာသက်ပန်အရောင်းစာရေးတစ် ဦး အနေဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားနက်ရှိုင်းစွာရှုပ်ထွေးစေသည့်အနက်ရောင်အနုပညာကိုအမြဲတမ်းထင်နေခဲ့သည်။ ဂျိမ်းကော်နာ၏ချဉ်းကပ်ပုံသည်အဆင့်လိုက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။ စီးပွားရေးစာအုပ်မှဖတ်ရန်တိုတောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမရခဲ့ပါ။
10:2009 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 23
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေး VP ကကျွန်ုပ်အားဤစာအုပ်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကနယူးယောက်နှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Marketing of Perfectection သည်ကျွန်ုပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သောပထမဆုံးစီးပွားရေးစာအုပ်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာမင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက်ရှိတယ်၊ အဲဒါကအဖိုးတန်သင်ခန်းစာတချို့ကိုသင်ယူဖို့အရူးအမူးဖြစ်နေတာပဲ။ ပစ္စည်းကောင်း